China Bullet chiratidzo girazi fekitori uye vagadziri | LYDGLASS
Bulletproof girazi, girazi rinoonekera, girazi rinoonekera, kana girazi risingadziviriri bara chinhu chakasimba uye chiri pachena chinoonekera zvakanyanya kusagadzikana kupinda neprojekita. Kufanana nezvimwewo zvinhu, hazvipindike zvachose.Mazhinji zvigadzirwa zvinodzivirira magirazi zvinogadzirwa ne polycarbonate, acrylic, kana girazi-rakapfeka polycarbonate. Iyo nhanho yekudzivirira inopihwa inoenderana nezvakashandiswa, mashandisiro ayo, pamwe nehukuru hwayo.
Girazi risingadzivirirwe rinoshandiswa pamahwindo muzvivakwa zvinoda kuchengetedzeka kwakadai, senge zvitoro zvezvishongo uye mamassisi, makadhi ekubhangi, uye mahwindo mumotokari dzemauto nedzemunhu oga.
Pashure: 6mm 8mm 10mm 12mm Yakapusa girazi Shower gonhi
Zvadaro: Girazi rakanyoroveswa
Bullet chiratidzo girazi musuwo
Bullet chiratidzo girazi fekitori
Bullet chiratidzo girazi windows
Bara Rinodzivirira Girazi
Bara Rinodzivirira Glazing